बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनु गलत,‘कुनै तयारी नै नगरी किन दिईयो ? | Citizen Post News
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफलतातर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘स्वयम नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहनुभएको छ । ७ महिनाको यो छोटो कार्यकालको संकेत हेर्दा हामीले अनुमान गर्न सक्छौं कि ओली नेतृत्वको सरकार क्रमिक रुपमा असफलतातर्फ उन्मुख छ ।’
उनले भने,‘केही दिन अगाडि, व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठकको दिन नेकपाकै बरिष्ठ नेता माधवजीले पनि जहाज डुब्नै लाग्यो कोही आएर बचाईदेउन भनेर गीत गाउनुभयो । मलाई लाग्छ त्यो उहाँले बोल्नैपर्ने भएर होला बाध्य भएर बोल्नुभएको हो । हिजो अस्तीमात्रै पनि म मिडियामा सुन्दैछु कि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका नेता झलनाथजीले पनि सरकार असफल भयो भन्नुभएको छ । प्रचण्डजीको पनि बोली सकारात्मक छैन । सरकारको कामकारबाहीबारे नेकपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टि छ ।’
उनले भने,‘तर, म व्यक्तिगत रुपमा सरकारको सफलताको कामना गर्दछु । म असफल होस भन्न चाहँदिन् ।’ ठूलो–ठूलो कुरा गरेर गरिब, निमुखा जनतालाई आशामा अल्झाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,‘कहिले रेल आउला भनेर गरिब जनतालाई कुनै मतलब छैन् । यसले उनीहरुलाई आकर्षण गर्दैन् । दैनिक जिविकाको बारेमा मात्रै जनतालाई ध्यान छ । तर, सरकारले महँगी, भ्रष्टाचारलगायतमा खोई त अनुगमन गरेको ?’
नेता खड्काले बहुसंख्यक जनता सरकारको प्रस्तुतिबाट निराशातर्फ उन्मुख रहेका पनि बताए । उनले भने,‘बलात्कारपछि निर्मला पन्तको हत्या भयो । प्रधानमन्त्रीले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन १२ वर्ष लाग्नसक्छ भन्नुभयो । यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले दिने हो ?’यद्धपि उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने सुधार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गरे । उनले भने,‘हेर्नुहोस्, विपीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्नुभएको थियो । उहाँको सरकारपनि दुई तिहाई बहुमतको थियो । १८ महिनामै सरकार ढल्यो । कहीँ ओलीजीको पनि नियती त्यस्तै नहोस् । अब भाषणबाजी गरेर देश चल्दैन् । जनताले डेलिभरी खोजेका छन् । मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनु गलत भएको भन्दै विरोध जनाए । उनले भने,‘कुनै तयारी नै नगरी किन दिईयो ? हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन् ।’ उनले वाईड बडी खरिद प्रकरणमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको कुरा सुन्नमा आएको बताए । सरकारले आफूहरुसँग कुनै छलफल तथा सम्वाद नै नगरेको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘प्रधानमन्त्री भारत, चीन र संयुक्तराष्ट्र जानुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ जानुभन्दा पहिले देउवाजीसँग डाईलग गरेको भए हुन्थ्यो । अमेरिकाबाट कोष्टारिका पनि जानुभयो । १८ देखि २० करोड खर्च भयो । तर, भ्रमण दलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई समावेश गर्नुभएन् । प्रधानमन्त्रीले सम्वाद नै गर्नुभएन् ।’ दुई तिहाईको बहुमत भएरमात्रै नहुने बताउँदै उनले सरकारले राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक र विदेश नीतिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नपर्नेमा जोड दिए ।